को हुन् क्लबहाउसको आइकनमा देखिएकी महिला? (भिडिओ) :: Setopati
को हुन् क्लबहाउसको आइकनमा देखिएकी महिला? (भिडिओ)
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ २८
सन् २०२० को मार्चदेखि सञ्चालनमा आएको क्लबहाउस छोटो समयमै लोकप्रियता कमाउने एपमध्ये पर्छ। यो एप आइओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छ। एपमार्फत प्रयोगकर्ताले बोलर र सुनेर विभिन्न रूपमा सहभागिता जनाउन सक्छन्। र, त्यहाँ विभिन्न विषयमा छलफल गर्न सक्छन्।
प्रायः सामाजिक सञ्जालको आइकनमा एपको छवि प्रतिनिधित्व गर्ने लोगो हुन्छ। तर क्लबहाउसको आइकनमा भने एक जना महिलाको फोटो छ। क्लबहाउसको आइकनमा देखिएकी महिला आखिर को हुन्? र, किन उनी नै आइकनको रूपमा देखिएकी छन्?
केही समयअघि क्लबहाउसमा अरू नै व्यक्तिको फोटो आइकनका रूपमा थियो। क्लबहाउसले प्रायः एक-एक महिनामा यसरी आफ्नो आइकन परिवर्तन गरिरहन्छ।
यतिबेला एपको आइकनमा देखिएकी महिला भने एसियन-अमेरिकन भिजुअल आर्टिस्ट, टेक्नोलोजिस्ट एवम् कार्यकर्ता ड्रु काटोओका हुन्। उनले सिलिकन भ्यालीमा आफ्नो आर्ट स्टुडिओ 'ड्रु काटोओका स्टुडिओ' सञ्चालन गरिरहेकी छन् जुन परम्परागत ग्यालरीको ढाँचाभन्दा फरक टेक स्टार्टप जस्तो देखिन्छ। उनी एक ट्रेन्डिङ कलाकार त हुन् नै, धेरै कलाकारका लागि प्रेरणाकी स्रोत पनि हुन्।
क्लबहाउसको रूमहरूमा जातीय न्यायलाई समर्थन गर्न ड्रुले आफ्नो कला र व्यवसायिक नेटवर्कमार्फत अमेरिकी एक लाख डलरभन्दा बढी रकम संकलन गरेकी छन्। उनले #StopAsianHate भन्दै डा. बर्निस किङसँग मिलेर #24HoursofLove इभेन्ट नै चलाइन्। डा. बर्निस ‘द किङ सेन्टर’का सिइओसमेत हुन्।
उनी क्लबहाउसबारे यसो भन्छिन्, 'कला भनेकै प्रविधि हो। र, प्रविधि भनेकै कला। मेरो जीवनको मन्त्र नै यही हो। क्लबहाउसले सामाजिक सञ्जाल क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा विश्वस्त छु।'
ड्रु क्लबहाउस आइकनको रूपमा छनोट भएको अप्रिल महिनाको अन्त्यतिर हो। तर उनी यो एपमा देखिएकी आठौं व्यक्ति हुन्। क्लबहाउस एपको आइकनका रूपमा ड्रुभन्दा अघि अन्य ‍व्यक्तिहरूको फोटो थियो।
बोल्न -सुन्न मिल्ने यस एपको इतिहास हेर्दा प्राय: एक महिनामा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आइकनका रूपमा छनोट गरिन्छ। र, सोही व्यक्तिले अघिल्लो व्यक्तिको ठाउँ लिन्छ। तिनको फोटो भने ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा राखिँदै आएको छ।
क्लबहाउसको आइकनमा देखा पर्ने पहिलो व्यक्ति एस्प्री डिभोरा हुन्। सन् २०२० को नोभेम्बरमा उनी क्लबहाउसको आइकनमा पहिलो पटक देखा परेकी थिइन्। एस्प्री बिजनेस इन्फ्लुएन्सर हुन्। उनी 'हीआरएलएटेक', 'हेलो कस्टमर' र 'विमेन इन टेक' जस्ता पडकास्टकी होस्ट तथा निर्मातासमेत हुन्।
डिसेम्बरमा ब्याल्क गिटारिस्ट एवम् गायक बोहमानी एक्स क्लबहाउसको लोगोमा देखा परे। उनी 'द कटन क्लब'का संस्थापक हुन्। उनले विभिन्न ठाउँका कलाकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अन्तर्क्रिया गरेका थिए।
बोहमानीपछि फेब्रुअरीदेखि क्लबहाउसको आइकनमा एक्सेल म्यान्सोर देखा परे। उनी पनि गीतकार एवम् गायक हुन्। महामारी समयमा क्लबहाउसमार्फत 'लुलाबाइ क्लब' रूम सुरू गरेर उनले विभिन्न क्षेत्रका प्रयोगकर्तासँग अन्तर्क्रिया गरे।
मार्च महिनामा अमेरिकी कन्टेम्पोररी कवि आजा मोने क्लबहाउस आइकन बनिन्। आजा कविसँगै लेखक, गीतकार र अभियन्ता हुन्।
स्टार्टअप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने फ्रान्सकी एरिका बटिस्टा, कानुन र संविधानबारे अन्तरक्रिया गर्ने ओकिल तथा स्टोरीटेलर जुलिया वेना लगायत पनि क्लबहाउस आइकन बनिसकेका छन्।
क्लबहाउसको आइकन समय-समयमा परिवर्तन गर्नुलाई कम्पनीले हाइपर लोकल पक्षलाई जोड दिएको बताएको छ। यो प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई एक्सपोजर दिनुका साथै समाजको लागि सकारात्मक सोच र काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, १३:५३:००
शक्तिशाली र सुन्दर बन्ने अथाह सम्भावना बोकेका तमाम महिलाका नाममा!
निःशुल्क अपग्रेड सुविधा सहित विण्डोज ११ सार्वजनिक
दीगो पर्यावरणका लागि खुला श्रोतलाई बढावा दिन ओपो एलएफ एआई र डाटा फाउन्डेशनमा सम्मिलित
सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा बढ्यो लगानी
हुवाइको नयाँ स्मार्टफोनमा १.८ इन्चको प्राइमरी क्यामरा सेन्सर हुने
एघार महिनामा ६५ लाख मोबाइल सेट आयात
‘आइफोन १३’ मा ठूलो क्यामरा लेन्स र सानो नोच हुने